HGH Pharmacy muBangkok bvuma kubhadhara mari
NeHGH Thailand November 29, 2017
Mari yebhadharo muBangkok
Nzvimbo yedu yekukura muHotmone pharmacy muBangkok inobhadhara mari nemari,
chete inowanikwa muThai Baht, kubhadhara kunoshandiswa kune mutumwa pashure
kutarisa uye kuongorora kutonga kwako.
Nzira yekubhadhara sei kune mamwe maguta nematunhu muThailand?
Mutero kune vatengi vanobva kuPuket, Chiang Mai kana mamwe maguta uye
nharaunda yeThailand yakaitwa nekubhadhara.
Mushure mokunge makaisa mutemo pa webhusaiti yedu tichishandisa motokari yekutengesa
kana kuti kuburikidza nemuongorori wepaIndaneti, tichatumira zvinyorwa zvedu zvebhangi
kune email yako yekubhadhara.
- Zita rebhangi
- Nhamba yeAunti
- Zita rekambani
Mushure mekusimbisa kubhadhara mukati maawa 3-12 tichazotumira zvinhu zvako
Verenga zvakawanda nezvekutumira (link)
Ndingawedzera sei mari kuAhg rekimisi yezvemari?
Kukwidza nyaya iyo mune mari, pane 2 nzira, ngatitaurire pamusoro peimwe neimwe.
1) Nhoroondo yepamusoro pamusoro peATM
2) Munzvimbo imwe neimwe yekutengesa kana dare guru reThai, unogona kuwana ATM
Mushonga wepamusoro uye kutumira mari kune mumwe mupiki, izvi zvinogona kuva
yakashandiswa uchishandisa kadhi kana nemichina yemari inobvuma mari
Kuti uite izvi, sarudza kushanda muATM
- Kutengesa mari
- Isa zita rebhangi
- Nhamba yekambani yemubatsiri
- Zvadaro bhadhara mune mari kana pamakadhi
- Mushure mekusimbiswa, simbisa zita nezita rekambani yemubatsiri
- Chivimbiso cherongwa
Pashure pokupedzisa kubhadhara, ndapota chengetedza ikopi
Dzoserai mubazi rebazi
Kana iwe uchienda iwe pachako kuBanki, iyo yose ichaita
usatora kupfuura 15 maminitsi, tonyora kana kunyora zvinyorwa zve
kubhadhara zvisati zvaitika, shandisa mari yekuendesa kubhengi, iyo
vashandi vebhangi vachakubatsira kuti uende nekunyemwerera nekuremekedza.
Kune vhengi vebhangi yebhangi muThailand, kubhadhara kunotoda
zviri nyore, zvikwereti zvinogona kuitwa kuburikidza nekushanda kwebhengi rekufambisa kana
online banking pasina kusiya imba yako.